Nahatratra Vokatra Manatantara i Kolombia Tamin’ny Olaimpika Londra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2012 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Svenska, Español
Vaovao farany (9 Aogositra 2012): Fotoana fohy taorian’ ny namoahana ity lahatsoratra ity, nandrombaka ny medaily faha enina ho an’i Kolombia i Jackeline Rentería tamin’ny lalao Olaimpika ao Londra 2012. Medaily alimo no azon’i Rentería tamin’ny taranja tolona.
Teo amin’ny tantaran’i Kolombia momba ny Lalao Olaimpika, ny lalao tao Londra tamin’ity taona 2012 ity no taonan’ny Olaimpika nahavitàna ezaka tsara indrindra teo amin’ny firenena. Nihoatra noho ny ezaka vita nandritra ny lalao tany Munich 1972, izay nahazoan’i Kolombia medaily volafotsy iray sy medaily alimo roa, sy tamin’ny lalao tany Sidney 2000, izay nahazoan’i Kolombia medaily volamena iray tamin’ny alalan’i Maria Isabel Urrutia ny zava-bitan’ireo delegasionina tamin’ity Lalao Olaimpika 2012 ity.
Tamin’ity lalao Olaimpika tao Londra ity, nandefa delegasionina mpanao fanatanjahatena maherin’ny 100 i Kolombia, izay ny delegasionina vehivavy no nahazo isan-jato be indrindra tao Amerika (57.8). Hatreto, tamin’ireo delegasionina vehivavy, Yuri Alvear, mpanao judoka nahazo medaily alimo tamin’ny taranja judo ary nahazo medaily volafotsy kosa ilay atleta vehivavy Caterine Ibarguen tamin’ny taranja vikina in-telo miantoana [Fanamarihana: Jereo ny vaovao farany eo ambony]. Tamin’ireo delegasionina Kolombiana lehilahy kosa, medaily alimo no azon’i Oscar Muñoz tamin’ny taranja taekwondo, 58 kilao, ary medaily volafotsy roa : ny iray norombahin’ i Rigoberto Uran tamin’ny hazakazaka an’arabe, ary ny iray kosa lasan’i Óscar Figueroa tamin’ny “fibatana fonjamby” milanja 177 kg.
Ambony ny maoraly amin’ny fanantenana mety hahazoan’ilay mpandeha am-bisikileta Mariana Pajón medaily volamena, izay hanavotan'ny Kolombiana ny toerany eo amin’ny top 30 [tampony 30] amin’ny tantaran’ny medaily izay mety hihoatra lavitra tsy araka ny nampoizina koa aza.
Niteraka fientanam-po teo amin’ny vahoaka ny fahazoana ireo medaily dimy, ka nahatonga azy ireo nizara ny hafaliany tamin’ny aterineto ho fankalazana ny ezaka lehibe vitan’ireo atletany. Nanampy tamin’ny fitateram-baovao, ny fizarana sary, sy ny fanehoan-kevitra ny tambazotra sosialy.
Marisol Ochoa‏ (@marisol8acardon) manome lanja ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy amin’ny fanatanjahatena:
@marisol8acardon: Mahatsiaro afa-po aho hoe medaily no azon’ny vehivavy Kolombiana tamin’ny lalao Olaompika fa tsy fehibory diadema noho ny faharatsaram-batany.
Mampisongadina ny zava-bitan’ireo vehivavy tao anatin’ny delegasionina, María Isabel (‏@Marita1899) amin’ny maha-vehivavy azy, afa-po tamin’ilay vehivavy mpiray tanindrazana aminy Caterine Ibarguen:
@Marita1899: Caterine Ibarguen… Ohatra eo amin’ny fiainana ary REHAREHAN NY KOLOMBIANA!!!
Nandritra izany, efa naneho hevitra ilay mpanao gazety Pablo (@pablodenarvaez7) tamin’ny 1 Aogositra tamin’ny fotoana nanombohan’i Yuri Alvear tamin’ny fifaninanana:
@pablodenarvaez7: Hifaninana amin’ny Lalao Olaimpika ilay Kolombiana judoka Yuri Alvear. Tandremo!
María Nelly Prada (@marianellyprada), tao anatin’izany, nankasitraka ny medaily vaovao azon’ilay tanora Oscar Muñoz tamin’ny taranja taekwondo:
@Maríanellyprada: Oscar Muñoz amiko no tena dadany tamin’ny andron’ny Olaimpika… medaily alimo, ary tsy dia nisy dokambarotra be loatra ny momba azy.
Mampisongadina ny fandraisan’anjaran’i Oscar Figuera, mpisera @HEVERTH5 nanoratra hoe:
@HEVERTH5: Volamena no mendrika ho azon’i Oscar Figueroa amin’ny lalao Olaimpika.
Paola Posso Vergara‏ (@PAOLAGAGAPOSSO) nivavaka ho an’i Rigoberto Urán:
@paolagagaposso: Afa-po tamin’i Rigoberto Uran!
Nametraka fitantarana manokana momba ireo medaily, ny atleta sy ny zava-bitany ny tao amin’ny Facebook sy ny bilaogy. Kanefa, na dia teo aza ireo fientanampo sy hafalindehibe, nisy ireo hafa nanao fampitahana mikasika ny fahasarotan’ny zava-misy atrehin’ny firenena.
Daniel Navia (@Daniel_Navia) nanoratra ity manaraka ity raha nandrombaka ny medaily volafotsy i Kolombia tamin’ny alalan’ilay mpandeha am-bisikileta Rigoverto Urán:
@Daniel_Navia: Nahazo medaily volafotsy ankehitriny i Kolombia. Ankehitriny, mila mandamina tsara fotsiny ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana ary ny politika isika mba ho firenena maha-te-honina I Kolombia.
Miller Castañeda D (@millercasta) nankasitraka ny zava-bitan’i Oscar Figueroa:
@Millercasta: Tsara foana ho an’i Kolombia ny medaily volafotsy sy ny zava-bita mahafa-po tamin’ny Olaimpika, noho ny medaily volamena azo tamin’ny kolikoly. Tsara ny vitan’i Figueroa.